Puntland oo looga digay la shaqeynta Madaxda Ahlusunna - Awdinle Online
Puntland oo looga digay la shaqeynta Madaxda Ahlusunna
March 7, 2020 (Awdinle Online) –Cali Xaaji Warsame Wasiirkii hore ee Waxbarashada Puntland ayaa ka hadlay Madaxda Ahlusunna ee isku aruursanaayo Magaalada Garowe, islamarkaana Puntland ay soo dhaweysay.
Waxaa uu sheegay in haddii ay dhacdo in Ahlusunna laga soo hubeeyo degaanada maamulka Puntland ay Qatar ku tahay Ammaanka iyo horumarinta maamulada Puntland iyo Galmudug.
Wasiirkii hore ee Waxbarashada oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Twitter-ka ayaa sheegay in looga baahan yahay labada maamulba in ay ka wada shaqeeyaan daris wanaaga iyo nabadgalyada, isagoo xasuusiyey sida ay muhiimka u tahay.
Dr, Cali Xaaji ayaa sheegay in Puntland looga baahan yahay in ay wada shaqeyn la yeelato Galmudug, maadaama dadka saamileyda Siyaasadeed ee Galmudug ay hadda isku raacsan yihiin maamulkooda, taasna ay muhiim tahay in la dhawro.
Hadalka Cali Xaaji ayaa ku soo beegmaya xili saacadihii u dambeeyey ay soo baxayaan wararka sheegaya in ay Galmudug cambaareyn doonto ficilo ay ku sheegtay in ay yihiin kuwa dhaawacaya midnimada Galmudug oo kasocda Garoowe.
Previous articleShirkii uu iclaamiyey madaxweyne Deni,oo uu furmi doona 15 bishaan
Next articleKismaayo oo ka socota Munaasabadda furitaanka Kalfadhigii 2aad ee Barlamaanka Jubbaland